विश्व – Page 17 – Medianp
अमेरिका-मेक्सिको सहमति कस्तो ?
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, भदौ १२, २०७५१२:२५0
अमेरिका र मेक्सिकोबीच एक वर्षसम्म चलेका परामर्शपछि उत्तर अमेरिकी क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यो सम्झौताले दुई देशबीचका व्यापारिक सम्पर्कहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मध्यरातमा युवतीको घरमा सुटुक्क जाने गरेका मेजर यसरी परे पक्रउ
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, भदौ १२, २०७५१२:०१0
एजेन्सी,१२ भदौ । कोर्ट अफ इन्क्वाइरीले भारतीय सेनाको लितुल गोगाईको अनुसन्धान गरि कानुन अनुसार कारबाही गर्न आदेश दिएपछि मेजर एक युवती सहित होटल बाट पक्राउ परेका छन् । २३ मे मा श्रीनगरको एक होटल ग्राण्ड
फ्लोरिडामा अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट तीनको मृत्यु, १० घाइते
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ११, २०७५०९:५८0
एजेन्सी, ११ भदौ । अमेरिकामा फेरि गोलीकाण्ड भएको छ । आइतबार राति फ्लोरिडामा भएको गोलीकाण्डमा तीनजना मारिएका छन् । १० घाइते भएका छन् ।फ्लोरिड सहरको जैक्सनविले सेरिफ कार्यालयमा गोली प्रहारमा मारिनेमा संदिग्ध हमलाकारी पनि रहेको
क्याथलिक इसाईहरुका सर्वोच्च नेता पोप फ्रान्सिसको राजिनामा माग, पाेपद्वारा यौन शोषण ढाकछोपका आरोप अस्वीकार
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ११, २०७५०९:५२0
पोप फ्रान्सिसले आफूले यौन शोषणलाई ढाकछोप गरेको भन्ने एक पूर्व भ्याटिकन दूतले लगाएका आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनले ती आरोपहरू प्रतिक्रिया दिन योग्य नभएको संवाददाताहरूलाई बताएका छन्। तर ती पूर्व भ्याटिकन अधिकारीले पोपसहित अन्य वरिष्ठ पादरीहरूले
भयानक दुर्घटनामा काटेको हात जोड्न यति सम्म गरे डाक्टरले
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १०, २०७५१७:४३0
एजेन्सी,१० भदौ । चीनको हुनान प्रान्तमा दुर्घटनामा परि हात गुमाएका एक युवकको हात जेडिएको छ । फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने क्रममा नाडीबाट काटिएर शरिर बाट नै अलग भएको थियो । काटिएको हात सहित अस्पताल पुगेका ती
भारतको केरलामा बाढी, पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४४५ पुग्यो
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १०, २०७५१५:१८0
एजेन्सी, १० भदौ । दक्षिणी राज्य केरलाको विनाशकारी बाढीमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या आइतबारसम्म ४४५ पुगेको छ । पानीको सतह घट्दै गएसँगै खोजी गर्दा पछिल्लो पटक ४५ जनाको शब भेटिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । राज्यका
विश्वको शक्तिशाली बन्दै यो देश , सेनाको लागि ४६ हजार करोड खर्च गरिदै
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १०, २०७५१४:५८0
एजेन्सी,१० भदौ । विश्वको शक्तिशाली देश बनाउने उदेश्य लिएर भारतले सेनाको लागि ४६ हजार करोड खर्च गर्ने भएको छ । सैन्य शक्तिलाई मजबुत बनाउनको लागि परिषदले यो रकम छुट्याएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ
देशलाई आर्थिक शंकटबाट माथि उठाउन भन्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीद्वारा उच्च पदस्त अधिकारीहरुको फस्ट क्लास हवाई यात्रा र खर्चमा प्रतिबन्ध
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १०, २०७५१४:००0
एजेन्सी, १० भदौ । देशलाई आर्थिक संकटबाट उठाउन भन्दै पाकिस्तानको नयाँ सरकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च अधिकारीहरुको फस्ट क्लास हवाई यात्रा र खर्चमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यका अनुसार इमरान खानको नेतृत्वमा नयाँ सरकारले
हजारौँ रोहिङ्ज्याद्वारा शरणार्थि शिविरमा प्रदर्शन
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १०, २०७५१०:०७0
एजेन्सी, १० भदौ । म्यानमारको सैनिक दमनका कारण ठूलो सङ्ख्यामा बङ्गलादेशलगायतका मुलुकमा पुगेका शरणार्थीहरूले ‘न्याय’को माग गर्दै सैनिक दमन भएको पहिलो बर्ष पुगेको सन्दर्भमा शनिबार (अगस्ट २५ मा) विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । आफन्तहरूमाथि भएको
राती झाडीबाट आवाज आउँदा कैसैले वास्ता गरेनन्, भोलिपल्ट त्यहाँ पुग्दा यस्तो रहेछ !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ०८, २०७५१५:५७0
एजेन्सी, ८ भदौ । भारतको झारखण्ड राज्यको राँचीमा बेवारिसे अवस्थामा नवजात बालिका भेटिएकी छन् । राती प्रहरी चौकी नजिकै रहेको झाडीबाट आएको आवाज सुन्दा कसैले वास्ता गरेनन् तर भोलिपल्ट विहान त्यहाँ पुगेर हेर्दा नवजात बालिका
Previous 1 … 16 17 18 … 116 Next